Shina fametrahana mora kofehy vita amin'ny gorodona vita amin'ny volotsangana fanamboarana sy orinasa | Volotsangana Volamena
Ny tabilao fametahana volotsangana dia manana endrika volotsangana tena tsara ary manome endrika tsara tarehy ny toerana ivelany. Ny sisiny lava dia misintona, miaraka amina joist (mety ho vy, hazo, volotsangana) fananganana, REBO volon'ondry azo apetraka haingana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo clip vita amin'ny vy sy visy, ny lafiny iray dia ampiarahina amin'ilay patotra, ny iray hafa lafiny tokony ampiarahina amin'ny decking.
REBO® dia mampiasa dingana tsy manam-paharoa maromaro hanatsarana ny hamafisan, ny fahamarinan-toerana, ny faharetan'ny afo ary ny faharetany amin'ny ambaratonga avo kokoa, ary mijanona ho loko voajanahary miaraka amin'ny fisehoana voajanaharin'ny hazo mafy. Ny tabilao fametahana volotsangana dia manana endrika volotsangana tena tsara ary manome endrika tsara tarehy ny toerana ivelany. Ny volotsangana dia nanjary iray amin'ireo fitaovana fananganana malaza indrindra, mamela ny fomba isan-karazany, loko, ary fomba fampiasana.
Ny volon-kofehy vita amin'ny kofehy REBO dia fitaovana hafa azo ekena sy maharitra. REBO dia mampiasa dingana manana patanty tsy manam-paharoa hanatsarana ny hamafiny, ny fitoniana dimensional ary ny faharetan'ny decking mankany amin'ny ambaratonga ambonimbony. Ny hafanana avo lenta 220 ℃ ny fitsaboana hafanana tafahoatra dia manova ny filaharan'ny molotra volotsangana, hiantohana ny holatra, atody kankana ary otrikaina ary asongadin'ireo vokatra mothproof, anti-corrosion ary anti-mavesatra. Ampiasaina be ao an-trano, hotely, birao, kianja, arabe, sekoly, villa, sns
Ny tabilao fametahana volotsangana dia manana endrika volotsangana tena tsara ary manome endrika tsara tarehy ny toerana ivelany. Ny sisiny lava dia misintona, miaraka amina joist (mety ho vy, hazo, volotsangana) fananganana, REBO volon'ondry azo apetraka haingana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo clip vita amin'ny vy sy visy, ny lafiny iray dia ampiarahina amin'ilay patotra, ny iray hafa lafiny tokony ampiarahina amin'ny decking. Ka ny decking dia azo tazomina mafy. Ity rafitra ity dia mamonjy fotoana sy mampihena ny vidin'ny asa mba hametrahana ireo takelaka fanaovana takelaka
Teo aloha: Faharetana avo lenta matevina vita amin'ny volotara any ivelany
Manaraka: E1 Eurpean fenitra eco-friendly Flooring any ivelany
Floodin'ny volotsangana volotsangana
Fanamboaran-trano eny ambanin'ny volotsangana
Flooring Patio Voninkazo
Rihana volotsangana mavesatra
Rihana volotsangana voajanahary
Vidin'ny gorodona vita amin'ny volotsangana any ivelany
Fitaovana arina volotsangana Moso ivelany
Rakotra volotsangana namboarina
Rihana volotsangana matevina
Flooring Bambu any ivelany
Rihana volon'ondry vita amin'ny kofehy